March 2013 - iftineducation.com
iftineducation.com – Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), R/wasaaraha xukuumadda Federalka ah ee Soomaaliya oo ay lasocdaan wafdi balaaran oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaanno ayaa booqasho gaaban ku tagay Qabiriga Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Marxuum Maxamed Siyaad Barre oo ku aasan Gedo. Wafdiga uu hogaaminayay cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa intii ay ku sugnaayeen hareeraha qabriga ayaa waxa ay ku aqriyeen…
iftineducation.com – Warbixin Ay Heleen Sirdoonka Geeska Afrika ayaa Lagu Sheegay In Shir Ka Dhacay Dalka Jabuuti Magaaladiisa Jabuuti Lagu Go’aamiyay In La Qaarijiyo Fanaanadda weyn ee Reer Jabuuti Nimco Jaamac. Nimco Jaamac Waxay Ku Noo shahay Magaalada Otawa Ee Dalka Kanada. Waxaana Warbixintu sheegtay In Dilka La Doonayo In Lagu Qaarijiyo Nimco Jaamac Loo Adeegsan Doono Gaari Isla Markaana La…
iftineducation.com – Sida ay sheegayaan wararka aan laga helaayo Garoonka Diyaaradaha magaalada Nairobi ee xarunta Dalka Kenya ayaa sheegaya in halkaasi dib ay u caga dhigatay diyaarada African Airways kadib markii ay cilad deg deg ah ku timid inyar kadib markii ay garoonkaasi kasoo duushay. Masuliyiin katirsan Dowlada federlka Soomaaliya ay Kamid yihiin Safiirka Soomaaliya u qaabishan Sinigole, Max’ed Xuseen Owliyo,…
iftineducation.com – Actarada Caanka ah ee ka soo jeeda Dalka Maraykanka Angelina Jolie ayaa lugu wadaa in dhawaan ay soo saarto Filim in muda ah ka soo shaqaynaysay kaa oo ka kooban qayba kala duwan sida ay tilmaamtay . Actaradaa Caanka ah ayaa tilmaamtay in filimkaa uu ku qaatay waqti aad u fog islamarkaana uu yaahy mid ay filayso in tageerayaal…
iftineducation.com – Fadeexad iyo ceeb tii ugu Xumeyd Abid Ayaa Waxaa La sheegayaa In Ay Qabsatay Mid Ka Mid ah Siyaasiyiinta Ugu Caansan Soomaalida Dalka Norwey ka dib markii ay ku soo baxday been iyo wax isdamaris. Ninkaan oo lagu magcaabo Khalid Axmed oo 37 sano jir ah oo ka tirsanaan jirey xisbiga shaqaalaha ee dalka Norway dhawaantaanse iska casilay ayaa…
DAAWO Geel qaab Qosol leh u dhawaaqaya !!
iftineducation.com – Soomaalida Geela dhawaqiisa waxay ugu yeeraan Olol balse Geelkan ayaa lagu arkay aduunka oo sida cod qof ciyaaraya oo kale matalaya isaga oo diidanaa in la dul saaro Gaari la doonayay in lagu qaado. HALKAN KA DAAWO MUUQAALKAAS QOSOLKA LEH Fadlan Like Iyo Share si aad asXaabtada inTa internetka iStiCmaAsho ugu gudbiso Thanks ____________________________________ Wax Yar Akhri Wax Badan…
Daawo Maxaa ka jira in Fanaanada Fartuun Birimo afduub ka badbaaday Muqdisho
iftineducation.com – Idaacada Shabeelle ayaa baahisay war ku saabsan in Fanaanada Fartuun Birimo oo bilahii la soo dhaafay Muqdisho joogtay ka badbaaday isku day koox dableeya ku afduuban rabtay. Inkastoo aysan Fanaanada si rasmiya uga hadlin xaqiiqada warkaas hadana ila wareedyo muhiima ayaa sheegay in dad kala shaqeeynayay bandhig faneedkeedii Muqdisho isku dayeen inay afduubtaan hasse yeeshee taasi ay ku fashilmeen…
Daawo Ra”isulwasare Saacid oo sidii Hitler u bixinaya Salaan.
iftineducation.com – Sawiro laga qaaday safaradii Raísulwasare Saacid ku tegay Garowe, Galkacyo, Dhuusamareeb, Caabudwaaq, Marko, Kismayo , Beledweyne iyo Jowhar ayaa dhamaantood si isku mida muujinaya isagoo bixinaya salaan lagu xasuusto manaxihii dunida soo maray ee Adlor Hitler. Sawirkii ugu dambeeyay ee looga qaaday Jowhar ilaa kii ugu horeeyay ee Marko wuxuu Raísulwasaraha bixinayaa salaan gacan taag togan taas oo Xeeldheerayaashu…
iftineducation.com – Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud ayaa uhambaleeyay madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta. ”Anigoo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowlada Jamhuuriyada Soomaaliya, waxaan jeclaan lahaa in hambalyo qalbiga ka timid usoo jeediyo madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyada Kenya” ayuu sheegay Xasan Sh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu kalsooni ku qabo in hogaanka cusub ee Kenya uu…
iftineducation.com – Tiradii ugu badnayd muddooyinkaan oo ah dad muhaajiriin ah ayaa gaaray Xeebaha wadanka Talyaaniga ee Magaalooyinka Sicilia iyo Lampedusa dadkaasi oo tira ahaan lagu qiyaasay ilaa 700 oo u badnaa Afrikaan kuwaasi oo u jeedaadoodu ahayd raadinta goob kamid ah Yurub oo ay ku badbaadaan. War jaraa id oo ay soo saareen Ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa lagu sheegay…